Gbasara Anyị | Nzukọ Seminar nke Nebọchị Na-adịghị Nso | Agụụ Dayzụ ahịa ptobọchị Crypto
Ọtụtụ ndị mmadụ si n'akụkụ dị iche iche nke ụwa kpebiri itinye aka na itinye ego na ego mba ofesi, na-ekele maka azụmaahịa a na-adaba adaba n'ụzọ ịntanetị.
Otu n'ime ihe ndị dị mkpa iji mee ka ihe ịga nke ọma na ahịa a na-aga nke ọma bụ ịhọrọ ezigbo onye na-ere ahịa Forex ma tinye aka gị na akụkọ ụlọ ọrụ ọhụụ yana nyocha ahịa. Nke a bụ ihe anyị Mụtara 2 Azụmahịa nwere ike bụrụ onye isi gị na ngwa agha na-enwu enwu; Mụọ 2 Azụmaahịa na-enye akụkọ ahịa oge, echiche azụmaahịa, nyocha ahịa, atụmatụ azụmaahịa, yana, nke kachasị mkpa bụ akara ngosi Forex maka azụmaahịa Forex.
Cheta, naanị otu ụzọ na-ezighi ezi, na ị ga-enwe njem siri ike n'oge niile, ma ọ bụ ịnwere ike ịnwe oge kachasị njọ ị nwere n'oge. Mụọ 2 Trade enyerela ọtụtụ ndị ahịa n'ụwa niile aka na-enwe obi ụtọ ugbu a, anyị chọrọ ka ị bụrụ otu n'ime ha. N'ebe a na Mụta 2Trade, anyị na-a heeda ntị oge dị na ngwa ahịa ndị bụ isi, cryptocurrencies, ụzọ abụọ, na indices, na-enyekwu echiche azụmaahịa na aro na nyocha miri emi.
Iji zụọ ahịa Forex, onye na-ere ahịa n'ịntanetị bụ ihe dị mkpa. Zụ ahịa na onye na-ere ahịa tụkwasịrị obi dị mkpa maka ahụmịhe na-enye obi ụtọ n'ahịa mba ụwa. E nwere ndị na-ere ahịa nọ ebe ahụ na-ekwe nkwa inyere gị aka, agbanyeghị na ọnụọgụ ole na ole, enwere ụfọdụ ndị na-azụ ahịa na-enweghị ntụkwasị obi na ndị enweghị ike ịtụkwasị obi, ọ nwere ike ịbụ ụbụrụ na-akụda mgbe ọ bịara ịmata ọdịiche nke ndị na-ere ahịa na ndị ndị na-abụghị ndị a pụrụ ịtụkwasị obi.
Ndị na-ere ahịa na-apụta n'oge niile, ma enwere ndị na-arụ ọrụ karịa karịa. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịbanye na mpaghara azụmaahịa na itinye ego na mpaghara a, ị ga-enwerịrị ike ịmasị ụfọdụ ezigbo ndụmọdụ ọkachamara ga-enye gị isi mmalite maka onye na-atụkwasị obi na ntụkwasị obi.
Anyị na-eburu ibu ọrụ nke ịnye gị ndụmọdụ ọkachamara kachasị mma iji mee ka usoro ị na-ahọrọ ezigbo onye na-ere ahịa dị mfe karị ma nwee nnukwu nsogbu. Anyị na-etinye ihe ọmụma anyị, ahụmịhe, na nkà nke ahịa ego maka abamuru gị; iji nye gị ahụmịhe na-enweghị nsogbu mgbe a bịara n'ịkọle na ịtụle nke ọ bụla n'ime ndị na-ere ahịa Forex iji nyere gị aka inweta ume na azụmaahịa azụmaahịa gị, n'otu oge na-enyere gị aka izere mmejọ ọ bụla nke ga-efu gị ogwe aka ma ọ bụ ụkwụ.
Mụọ ahia 2 bụ saịtị ezubere iji kwadebe ndị ahịa na ndị na-etinye ego na eziokwu na nkọwa achọrọ iji bụrụ onye na-aga nke ọma n'ụwa azụmaahịa.
Iji nwee ihe ịga nke ọma na ngalaba azụmaahịa ego, mmadụ kwesiri inwe nghọta miri emi banyere ahịa ego n'ọtụtụ ebe. N'ebe a Mụta 2 Trade, anyị nwere otu ndị ọkachamara nwere ahụmịhe azụmaahịa gbasara ahịa ahịa niile dị ka mkpuchi, ngwa ahịa, ego na indices ndị na-achọ inye ndị na-azụ ahịa na ndị ọkachamara ahịa azụmaahịa ihe ndị bụ isi na teknụzụ.
Otu dị n'azụ Mụta 2 Trade maara nke ọma ihe onye na-ere ahịa Forex pụtara, nke ga-enyere ndị ọrụ anyị aka inweta ihe ịga nke ọma na ụwa azụmaahịa ego. Na, anyị na-ewere ya dị ka ọrụ anyị inye gị ndụmọdụ ọkachamara ga-enyere gị aka ime mkpebi ọ bụla. Ọ baghị uru ma ọ bụrụ na i sonyeere ahịa Forex ma ọ bụ ọ bụrụ na ị maara ụwa azụmaahịa, ihe ịrụ ụka adịghị ya na ndụmọdụ ndụmọdụ anyị ga-enyere gị aka ịme mkpebi enweghị nsogbu.
Emelitere ikpeazụ: July 14th, 2020